Tag: ọdụ ụgbọ mmiri | Martech Zone
Tag: ọdụ ụgbọ mmiri
Kedu ihe dị iche n'etiti AI na Mmụta Ngwa?
Tuesday, May 8, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ echiche a na-etinye n'ọrụ ugbu a - ụkpụrụ a na-ahụ anya, nyocha ihe mmụta, mmụta miri emi, mmụta mmụta igwe, wdg. Otu nke pụtara ìhè bụ na ndị mmadụ na-ejikọ ọgụgụ isi na mmụta igwe. Nkuzi igwe bu udi nke AI, mana AI ekwesighi itinye akwukwo na igwe. Amamịghe echiche (AI) na